Igunya lokuqukethwe: yintoni, kutheni kubalulekile, kwaye ungayifumana njani!
NgeCawa, ngoMatshi 8, 2015 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Douglas Karr
Siza kubhala okuninzi malunga igunya content, kodwa ndifuna ukwazisa umxholo othi iarhente yethu Ebesebenzisa ngoncedo lwamaqabane ethu e Imithombo yeendaba yeMetonymy kwaye I-Dittoe PR.
Imvelaphi kuGunyaziwe woMxholo
Umceli mngeni esiqhubeka nokufumana kunye nabaxhasi bethu kukuba kuhlala kubonakala ngathi kukho ukusilela kwesicwangciso njengoko bethumela ukuthengisa umxholo wabo. I-Altimeter inika ingxelo yokuba I-70% yabathengisi ayinaso isicwangciso somxholo esingqinelanayo okanye esidibeneyo.
Zombini ezi zinto zifunekayo kunye nohlalutyo lwasemva kwexesha ekufuneka zenziwe ngesicwangciso sakho sentengiso. Indaleko:
uhlobo -Inkampani yakho ifuna inkcubeko esekwe kunye nesazisi.
Imiyalezo -Iinkampani kufuneka zenze uphando ukuze ziqonde ukuba ngoobani abaphulaphuli bakho kunye nendlela yokunxibelelana nabo, uzihlule kwabanye okhuphisana nabo.
umxholo -Iinkampani kufuneka ziphuhlise umxholo onika iimpendulo zokuba abathengi kunye nabaphandi baphanda kwi-Intanethi, babonelela ngexabiso kunye nokwakha ukuthembana nabo ukubakhokelela kuthethathethwano nenkampani yakho. Oku kufuneka kufezekiswe kwiidemon.
wokuKhuthaza -Iinkampani njengoko zichonga umxholo osebenza phezulu, loo mxholo kufuneka ukhuthazwe ukuze ufikelele kwaye ufumane ababukeli abatsha. Ayikokukhangelwa okuhlawulelweyo kuphela, kodwa kuhlawulwa ukufikelela kubudlelwane boluntu kunye noluntu olonyusa imithombo yeendaba ekwabelwana ngayo, efumeneyo kunye nehlawulwayo.
uhlalutyo Uhlalutyo olunzulu lokuchonga ukuba yintoni eyenziwayo, apho isebenza khona kunye nezikhewu zokuphuhlisa iimfuno zomxholo ngakumbi. Uhlalutyo lunokubonisa ukuba kuya kufuneka uguqule uphawu lwakho okanye uhlengahlengise umyalezo wakho.
Sihlala sinabathengi abanqwenela ukutsiba ngokuthe ngqo ekuphuculweni komxholo nangona bengenalo isazisi esomeleleyo okanye bengaziqondi ukuba babhalela bani okanye bawudla njani umxholo. Kwaye ngamanye amaxesha, sibona utyalo-mali olukhulu kuphuhliso lomxholo ngaphandle kwesicwangciso sokukhuthaza umxholo.
Ukuba kukho ubuthathaka kwizicwangciso ezingaphambili okanye zasemva kwemveliso kunye nentengiso yomxholo wakho, awunakukuqonda ngokupheleleyo ukubakho kwefuthe lomxholo owuphuhlisayo.
Umxholo wegunya yindlela emiselweyo apho uphando lunganikezeli nje ngento ekubhalelwa ukuyizalisekisa ibango lomxholo malunga neemveliso kunye neenkonzo zakho kwi-intanethi, yindlela yokwandisa ukusebenza komxholo ngokuhamba kwexesha. Ngenkqubo esebenzayo yokugunyazisa umxholo, umxholo wakho uya kwandisa ukubonakala kwawo kwiinjini zokukhangela, kwimidiya yoluntu, iisayithi ezifanelekileyo zangaphandle, kunye nezakho.
Uveliswa njani uMxholo wokuKhulisa iGunya?
Umxholo weGunya uzisa ukuthengisa okwakudala indlela yokuvelisa umxholo kunye nokuphunyezwa. Umxholo unenjongo kwaye ulinganiswe ukuqhubeka nokwakha igunya.
Zithini iiMetriki zoGunyaziwe woMxholo
Kungenxa yokuba ujonga yonke imiba yohlobo lophawu lwakho, umyalezo kunye nomxholo, iimethrikhi zibandakanya yonke into yokujonga ukusebenza ngokufumana, ukugcina kunye nokuthengisa abathengi. Iihambo zabaThengi (hayi enye) ziboniswa ngokuhamba kwexesha njengoko lonke uphawu lomxholo wakho kunye nokunxibelelana kwabathengi nawo kufakwa kwaye kubekwa esweni- kubandakanya ukwamkelwa, uluvo, inqanaba, ukujonga, inqanaba, ukuguqulwa, unxibelelwano, ukubonakala, ukucofa, ukugqibezela, izabelo, njl.
Iziphumo zoThengiso loMxholo
Nanku umzekelo olula wendlela iGunya lokuQinisekiswa okunene liqhuba inqanaba ngokubanzi labathengi. Apha ngezantsi sisishwankathelo somxholo wabathengi kunye nenqanaba lokudityaniswa kwenyanga leyo yabathengi ukuya kwinyanga kule minyaka imbalwa idlulileyo. Qaphela ukuba xa zizonke, zibekwa emazantsi ephepha 1 ngokusemgangathweni.
Nanku umxholo esiwuvelisileyo, sabelane ngawo, kwaye sawazisa. Ngomgangatho ophakathi we-3 okanye we-4, ixabiso lesi sicwangciso somxholo sigqumelela nawuphi na umxholo oveliswe ngumthengi. Njengoko usazi ukuba izinga lokucofa kwezi zikhundla liphezulu ngokubonakalayo kunangaphantsi kwephepha okanye ngaphezulu kwephepha ezimbini.
Okungakumbi okuzayo ...
Igama elithi Content Authority labhalwa ngu UBryant Tutterow, oye waphumeza kwaye waphucula isicwangciso kwiinkampani ezininzi. Iziphumo zininzi ngokufana nomdla wokudibanisa. Ngokugxininisa kububanzi beendawo zonxibelelwano, iintlobo zomxholo, kunye neendawo zabaphulaphuli kunye nokuqhuba kunye nokukhuthaza nokwenza ngcono umzamo odibeneyo, sikwazile ukukhula kwinqanaba kunye nokufikelela kwabaxumi bethu ukuya kuthi ga kwi-940%.
Siza kubhala okuninzi ngakumbi malunga negunya lomxholo kungekudala. Ukuba inkampani yakho ipapasha umxholo omkhulu kwi-intanethi kodwa awuluboni ukwanda kwempembelelo yakho, nxibelelana nathi ku DK New Media kwaye sinokunceda.
tags: utitshala obukhaliigunya contentUkuThengiswa kweMpahlaisicwangciso sokuthengisaqhinga lomxholoDK New MediaAmanani entengisoUhlobo lokukhangela eziphilayoudidiigunya lokukhangelaisikhundla kwimidiya yoluntuYintoni iyintoni igunya lomxholoWhitepaper
Mar 11, 2015 ngo 1:48 PM
Ibhlog enkulu, andinakulinda ukuba ufunde ngakumbi kwigunya lomxholo.
Epreli 18, 2016 ngo-12: 36 AM
Oku kuluncedo kakhulu. Eli nqaku ligubungela yonke into!
Sep 12, 2016 ngo-4: 24 PM
Sep 13, 2016 ngo-8: 53 PM